आज मङ्सिर ४ गते शनिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / आज मङ्सिर ४ गते शनिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
आज मङ्सिर ४ गते शनिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !
admin November 20, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 139 Views
व्यवसायिक क्षेत्रमा उच्च अधिकारीसँग आवश्यक विषयमा चर्चा हुनेछ। कुनै परियोजनाले सरकारी लाभ प्राप्त होला। कार्यालयसँग सम्बन्धित कार्यको योग रहेको छ। परिवारमा आनन्दको वातावरण छाईरहनेछ। घरको सजावट र अन्य व्यवस्थामा परिवर्तन गरेर घरको वातावरणमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ।
दिन मिश्र फलदायी रहेको छ। व्यापारीले व्यवसायमा पैसा लगानी गरेर नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न सक्षम हुनेछ र भविष्यका लागि योजना पनि बनाउनेछन्। धार्मिक स्थलको बलिदानको बृद्धि हुनेछ। स्वास्थ्यमा ध्यान राख्नुहोला।
बिरामीको उपचार वा शल्य चिकित्सा सम्भव नहुन सक्छ। रिसले तपाईलाइ हानी गर्नेछ। शारीरिक र मानसिक अस्वस्थ रहनुहुनेछ। त्यसैले बोलीमा ध्या राख्नुहोला। उच्च खर्चको कारण, आर्थिक, त्यहाँ एक वित्तीय संकट हुनेछ। मानसिक शान्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ।
मित्र र परिवारसँग आनन्दपुर्वक समय बिताउनुहुनेच। मनोरन्जन प्रवृत्ति पनि रमाईलो हुनेछ। व्यापारको क्षेत्र पनि फाइदासयक रहेको छ। साथीहरुले फाइदा लिन सक्छ्न् । छोटो यात्रा हुनेछ। तपाईले सामाजिक रूप बाट सम्मान पाउनुहुनेछ।
मानसिक रूपले चिन्तित रहनुनेछ। शंका र उदासीनता दिमागमा हावी हुनेछ। व्यापारमा सहयोगीहरुको सहयोग कम हुनेछ। उच्च अधिकारीसँग हिद्नुहुनेछ। श्रम कार्यको परिणाम उपयुक्त नहुँदा निराशा रहनेछ।
विधार्थीको लागि कठि समय रहेको छ। सन्तानको विषयमा चिन्ता रहनेछ। शेयर-सट्टामा सम्हालेर चल्नुहोला। मनमा खिन्नताको अनुभव हुनेछ। बौद्धिक चर्चामा नउत्रिनुहोला।
शारीरिक रुपले शिथिलता र मानसिकरुपले व्यग्रताको अनुभव गर्नुहुनेछ। आमाको विषयमा चिन्ता रहनेछ। पारिवारिक वातावरणमा झगडा होला। सामाजिकरुपले अपमानित नहोस् यस कुराको ध्यान राख्नुहोला।
तपाईको लागि लाभकारी दिन रहेको छ। आर्थिक लाभको हुनेछ। प्रियजनहरूसँगको सम्बन्धमा प्रेममा अधिकता हुनेछ। नयाँ काम सुरू गर्नका लागि समय शुभ रहेको छ। मानसिक रूपमा खुशी रहनुहुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरुले विजय प्राप्त गर्नेछन्।
मन दुविधामा रहनेछ फस्नेछ। पारिवारिक वातावरण अशान्तिपूर्ण हुनेछ। निर्धारित कार्यहरु पूरा नगर्दा मनमा निराशा अनुभव गर्नुहुनेछ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय नलिनुहोला।
निर्धारित कार्य सजिलै। सम्पन्न हुनेछ। घरको जीवनमा आनन्दमय रहनेछ। स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ। मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रहनेछ। साथी र प्रियजनसँग भेट हुँदा खुशीको वातावरण सिर्जना हुनेछ। राम्रो खाना र लुगा पाउनुहुनेछ र तपाईंले विवाहित जीवनमा आनन्द र सन्तुष्टि अनुभव गर्नुहुनेछ।
आर्थिक लेनदेन नगर्नुहोला। खर्चको रकम बढ्नेछ। शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ रहनुहुनेछ। आफन्तसँग मतभेद खडा हुनेछ। कसैको चासोको लागि आफैलाई समस्यामा नपार्नुहोला। रिस नियन्त्रण गर्नुहोला ,मानहानिको सम्भावना रहेको छ ।
सामाजिक समारोह वा समारोहमा भाग लिनुहुनेछ। साथीहरू – प्रियजनसँग भेट गर्दा मन खुशी हुनेछ। राम्रो समाचार प्राप्त गर्नुहुनेछ। पत्नी र बच्चाहरूबाट लाभ लिनुहुनेछ। आकस्मिक पैसा प्राप्त हुनेछ ।
Previous नेपालले पनि थप्यो सातामा एकदिन बिदा , आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा थपियो !
Next अब कहिलेबाट माैसममा सुधार हुन्छ ?